Gulufi Mee Daaman -
Gulufi Mee Daaman
bilisummaa September 7, 2013	Leave a comment
Boorri waa jab na taphsiisee
Seenaan isaa garaa ana raase
Garmaamaf isatu nu kaase.
Boora naa jabaadhu
Tokkicha akka kumaa
Inni oromiyaa tokkuma
Gulufi mee daamaan
Maxaana yaabbattii jaaman.
Yaa rabbi naa dhagayi
Kaayyoo booraa galmaan gayi.
Hamaan durii ka kufee
Ka biraa dalgaan nu lufe
Hin dubbannaa yoo nuu lufe
Nyaapha biyya dhaga’aa
Maaltu irraa dhaga’aa?
Previous Hiwaati fi Tiwulidda-Itoophiyaawwiin nu Fixan!
Next Dhaamsa Jajjabinaa fii ittifufinsa Qabsoo Maatii barataa Gaarumaa Jiraataa fi Qabsaawaa Qeerroo Walabummaa Oromiyaa Maraaf